Catharanthus roseus: zavamaniry miloko marevaka | Bezzia
Ny periwinkle Madagascar, na araka ny ahafantarana azy amin'ny anarana siantifika hoe Catharanthus roseus, dia zavamaniry iray izay an'ny fianakavian'ny zavamaniry. Fantatra amin'ny anarana vinca rosea koa izy io, ary raha somary marina kokoa dia zavamaniry karazana Acopynacae izy.
Araka ny anarany dia tompon-tany amin'ny nosy Madagascar izy. Manana ny mampiavaka azy ny zavamaniry maharitra taona, nefa miaraka amin'izay dia lasa isan-taona ny fambolena azy.
1 Toerana sy firenena ahitana azy matetika
2 Toetra mampiavaka an'i Rose Catharanthus
3 Kalitao rosaranthus roseus
3.1 Fifanarahana mora foana amin'ny tontolo samihafa
3.2 Tsy mila tany misy fatran-tsakafo avo
3.3 Mora manangona sy mitantana masomboly
Toerana sy firenena ahitana azy matetika
Mety ho nosy lavitra no niandohany, nefa na izany aza nahavita nandao ny toerana niandohany ka hatramin'ny nahitana azy eran'i Mexico. Ary tsy mahagaga izany ilay zavamaniry dia raisina ho santionany ivelany ary ara-dalàna tanteraka ny mahita ny Catharanthus roseus any Baja California del Sur, any Sinaloa, Veracruz, Yucatán ary toerana hafa.
Ny zava-misy mahaliana momba an'io zavamaniry io dia tena kely izy ireo raha ampitahanao amin'ny zavamaniry hafa. Izy ireo dia ho toy ny santionany handravahana trano, birao, varavarankely sy ny hafa, nefa tsy mila toerana be loatra.
Mazava ho azy fa miankina amin'ny toerana nambolena azy ireo izany ary raha tazomina izy io, amin'ny fomba azo itehirizana azy amin'ny habe iray. Ary na dia tany amina toerana lavitra toy izany aza no niandohany, dia zavamaniry iray izy izao izay hita tsy any Mexico ihany noho ny fizarana avo azy, fa koa any amin'ireo firenena amerikanina latina samihafa.
Indrindra ao Venezoela, aiza mirona maniry mora foana, amin'ny tanimboly, zaridaina ary toerana misy triatra ny asfalta. Toy izao no azo ilazana fa zavamaniry tena mahay mitombo amin'ny toerana tsy ahafahan'ny zavamaniry hafa.
Toetran'ny toetra Catharanthus roseus
Izy io dia zavamaniry karazana ahitra izay mijanona ho maitso maizina foana rehefa tonga amin'ny dingana lehibe. Rehefa eo am-piandohan'ny fitomboany dia mazàna miloko maitso mavana ny ravina.
Satria ny tahon'ity zavamaniry ity dia tsy matevina na mafy orina raha oharina amin'ireo zavamaniry ahitra hafa. afaka mahazo haavon'ny 1 metatra amin'ny ankapobeny izy ireo. Tsy mirehareha amin'ny habetsaky ny volany samirery izy ireo, fa noho izy ireo mora mitombo be dia be, raha vao jerena dia toy ny kirihitra lehibe ary afaka mahazo tany betsaka raha tsy voafehy.
Toy izany koa, ny fampitomboana azy dia tsy olana, raha mbola mitady hanome voajanahary voajanahary kokoa amin'ny zaridainanao ianao, satria raha vao mamony ilay zavamaniry, dia mazàna manome fomba fijery tsara kokoa ny toerana noho ny voninkazo keliny.
Momba ny refin'ny raviny, Matetika dia 2.5 ka hatramin'ny 9 cm ny halavany raha be indrindra, fa amin'ny ankapobeny, dia ravina kely dia kely amin'ny karazana oval izy ireo. Raha ny sakan'ny ravina dia tsy mihoatra ny 3 cm izy ireo. Ho fanampin'izay, ny fehezam-boninkazo tsirairay avy amin'ny fotony lehibe dia mazàna manana ravina roa izay ho hitanao hatrany amin'ny tsiroaroa mifanohitra.
Na eo aza ny lazany lehibe any amin'ny firenena amerikana afovoany sy amerikanina latina, Izy io dia karazana iray ahiana atahorana. Ny antony lehibe indrindra dia satria ny ala izay itomboany matetika dia voakasik'izany ary lasa lavenona hanitarana ny voly sy ny fambolena.
Toetoetran'ny Catharanthus roseus
Fifanarahana mora foana amin'ny tontolo samihafa
Etsy ankilany ary manasongadina ny fahaizany mampifanaraka, mora ny mamboly saika na aiza na aiza ary mora maniry tokoa izy io. Azo lazaina fa ny fizotran'ity zavamaniry ity dia tsy sarotra loatra, satria tsy mila otrikaina avo na karazana tany manokana haniry.
Tsy mila tany misy fatran-tsakafo avo
Mazava ho azy, raha mikasa ny hamboly azy amin'ny tany manankarena amin'ny otrikaina ianao dia hitombo mora kokoa ary hirona amin'ny voninkazo ao anatin'ny fotoana fohy. Ary eo no ilana ny fahafahany manaparitaka. Raha vao ny Catharanthus roseus namony, manomboka mamorona cocoons maromaro aiza no ahitanao masomboly mainty kely.
Mora manangona sy mitantana masomboly
Ireo dia tonga amina fonosana voajanahary izay masaka indray mandeha, misokatra mora foana izy ireo. Tsy lazaina intsony, tena voa kely sy maivana izy ireo, noho izany dia hanaparitaka azy ireo ny rivotra kely na kely aza ary miverina ny tsingerina.
Ny zavatra tsara momba ireo fonosana ireo izay niavian'ny voa, dia azonao esorina na dia tsy masaka tanteraka aza izy ireo ary mitahiry na aiza na aiza, eny, kokoa amin'ny toerana mafana.
Mahazo hafanana tsy tapaka, ny fonosana misy masomboly dia hanafaingana ny fizotran'ny fahamatorany ary ho tonga amin'ny teboka iray izay ho lasa volontany izy ireo. Any no ahafahanao manokatra azy ary mahazo ireo masomboly ao anatiny.
Azonao atao ny mamboly azy ireo raha tianao na ianao dia mitazona azy ireo mandra-pifidiananao ny toerana hampitomboana azy ireo. Moa voa izay manana fiainana talantalana tena tsara ary tsy ho very ny fahaizan'izy ireo maharitra.
Ho an'ny maro, ity zavamaniry ity dia mety ho toa mety indrindra amin'ny fanaingoana zaridaina sy fanaovana ny aloaky ny trano sy lavarangana ho tsara tarehy kokoa. Ny marina dia zavamaniry izay raha tsy omena fikarakarana mifanaraka amin'izany, ireo dia hirona amin'ny aretina.
Ho fantatrao fa marary ilay zavamaniry na voan'ny holatra rehefa nahita izany ianao lasa miloko maitso ny lokon'ny ravina. Na izany aza tsy izany ihany. Rehefa mitranga izany dia eo ambanin'ny ravina dia misy teboka fotsy kely izay, raha mikasika ny tanan'olombelona, ​​dia mahatsapa ho toy ny fasika.
Aza manahy raha mikasika azy ireo ianao, dia tsy hisy vokany eo aminao izany. Soa ihany rehefa mitranga izany, diovy amin'ny rano fotsiny ilay zavamaniry. Azonao atao ny mandeha miaraka amin'ny tsorakazo, cluster by cluster ary esory tsikelikely ireo pentina fotsy ananan'ny zavamaniry ireo.
Rehefa afaka fotoana voafaritra iray dia hihombo ny zava-maniry ary tsy mila ny fitsabahan'ny tànanao intsony. Etsy ankilany ary na dia zavamaniry tena tsara aza izy io, mila mitandrina tsara ianao amin'izany. Fahita tokoa ny mahita an'izany Catharanthus roseus very ny lokony ary hamirapiratra amin'ny tsy fikarakaranao azy. Ary raha vao mitranga izany dia halazo tsikelikely ilay zavamaniry.
Ampy ny manondraka rano azy ireo isaky ny roa andro. Zavamaniry tena mahatohitra izy ireo ary tsy maninona na dia eo ambanin'ny masoandro mivantana aza ianao Na apetrakao amin'ny toerana ilatsahan'ny hazavan'ny masoandro amina faritra iray amin'ny andro izy ireo, na dia aleonao mamboly azy ireo ambanin'ny zavamaniry lava kokoa. Izany dia hanome loko mazava kokoa ary hijanona elaela kokoa izy ireo.
Zava-misy mahaliana alohan'ny famaranana dia izay amin'ity zavamaniry ity dia afaka mahita karazana samihafa ianao, ary samy manana ny mampiavaka azy ny tsirairay. Saingy ny fahasamihafana lehibe dia hiankina amin'ny lokon'ny voninkazoo. Matetika izy ireo dia manana loko fuchsia, fa misy koa fotsy sy mena mena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Madagascar Periwinkle (Catharanthus roseus)
Lakozia miafina afaka amin'ny masonkareny
Torohevitra ankapobeny amin'ny fampiharana ny loko ao an-trano